YF-H-209 Casri ah 3 Khaanad Caddaan Madoow Lacag La Dhigo oo Dahab ah
Uma baahnid inaad ku qarashgareyso tan lacag ah inaad qolkaaga jiifka u rogto meel quruxsan oo aad ku riyoonaysay, iyo meelaha lagu caweeyo habeenkii waa caddeyn. Haddii aad rabto hal khaanad ama saddex…
YF-H-807 Casriga Naqshadeeyaha Laashka Laabta ee Khaanadaha
Naqshad yar laakiin xarrago leh oo ka sarreysa dhammaan waxay bixisaa qaab heer sare ah oo diiradda saaraya gudaha gudaha.
Hal fiiri, hal taabasho ayaa ku filan in lagu aqoonsado tayada dhabta ah. Tan waxaa lagu caddeeyay naqshad gaar ah, qalab si taxaddar leh loo xushay…
YF-H-806 60 Inch Sideboard Buffet 4-Albaab Albaabka Jadwalka Miisaanka Cuntada
Rafcaan Xasaasi ah: Waxaa lagu dhajiyay khadadka joomatari iyo dahab lagu dhameeyay, golahaan dhinaceeda wuxuu ku raaxeysanayaa rafcaan jilicsan oo raaxo leh.
Labadaba qayb muhiim ah oo keyd ah oo loogu talagalay qolkaaga wax lagu cuno iyo meel lagu soo bandhigo qaboojiyaha ama cabbitaannada…